Asus Zenfone 3, Zenfone 3 Deluxe na Zenfone 3 Ultra bụ ndị ọrụ ugbu a | Akụkọ akụrụngwa
Asus Zenfone 3, Zenfone 3 Deluxe na Zenfone 3 Ultra bụ ndị ọrụ ugbu a
Mgbe oke asịrị dị iche iche taa Asus gosipụtara ezinaụlọ ọhụrụ nke smartphones, mee ya baptizim na aha Zenfone 3. N'ime ezinụlọ a, anyị ga-ahụ ngwaọrụ mkpanaka ọhụrụ 3; ndị Zenfone 3, ndị Zenfone 3 Deluxe na Zenfone 3 Ultra. Ọdụ ọhụrụ ndị a niile ga-abịa n'ahịa n'oge na-adịghị anya, maka ndị ọrụ dị iche iche.
Banyere Zenfone 3, anyị na-ekwu maka ngwaọrụ dị n'etiti nwere ezigbo nlezianya. Na Zenfone 3 y Zenfone 3 Ọkachamma Ha bụ ndị njedebe abụọ dị elu, ọ bụ ezie na na nke mbụ, ha bu n'uche maka ndị ọrụ ahụ niile na-achọ ọnụ na ihuenyo nke akụkụ nkịtị. N'okwu nke Versiondị Ultra, anyị ga-ahụ ihu igwe 6,8-inch, echere maka naanị ndị ọrụ ole na ole.
2 Asus Zenfone 3 Ọkachamma
Ngwaọrụ izizi nke ezinụlọ ọhụrụ a nke Asus bụ Zenfone 3, nke nwere ihuenyo 5,5 nke nwere ọkọlọtọ na ihe kariri njirimara na nkọwa ziri ezi nke ga - eme ka ọ bụrụ onye ama ama nke akpọrọ n'etiti ahịa.
Lee, anyị gosiri gị isi nkọwa nke Asus Zenfone 3;
Ihuenyo 5,5-inch nwere mkpebi FullHD nke 1.920 x 1.080 pikselụ. Super IPS + LCD
64GB nke nchekwa dị n'ime
Igwefoto 16 megapixel nke na - ejikọ ihe mmetụta Sony IMX298
Batrị nwere ike nke 3.000 mAh
USB 2.0 -dị-C njikọ, Hi-Res Audio
Gam akporo 6.0 Marshmallow sistemụ arụmọrụ na Zen UI 3.0 nhazi ọkwa
Dị na ọlaedo, acha anụnụ anụnụ, oji na ọcha
Asus Zenfone 3 a doro anya na ọ bụ ihe kachasị nwayọ nke ezinụlọ ọhụrụ a, nke ga-abụ nhọrọ na-adọrọ mmasị maka ndị ọrụ ahụ niile na-achọ ama na nlezianya na atụmatụ ndị na-adọrọ mmasị karịa onye ọrụ ọ bụla. Ọnụahịa ya ga-abụkwa ọzọ nke nnukwu agwa ya na nke ahụ bụ na anyị ga-ahụ ma emesịa ọ gafere $ 300.
Asus Zenfone 3 Ọkachamma
Kedu otu ọ ga - esi bụrụ na ọ bụghị Asus achọghị ịhapụ nhọpụta ya na nke a na - akpọ ahịa dị elu ma gosipụta nke a Zenfone 3 Ọkachamma, nke anyị nwere ike ịsị na ọ bụ anụ ọhịa dị adị. Ma ọ bụ na onye nhazi ya, nke kachasị ọhụrụ nke Qualcomm rụpụtara nakwa na anyị nwere ike ịhụ na nyocha ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ọmarịcha 6GB RAM ya, ọ dị ka obi siri anyị ike na anyị ga-eche otu n'ime ọdụ kachasị ike kachasị na arụmọrụ kacha mma na ahịa.
Lee, anyị gosiri gị Asus Zenfone 3 Deluxe isi atụmatụ na nkọwa;
5.7-anụ ọhịa Super AMOLED ihuenyo na mkpebi nke 1.920 x 1.080 pikselụ
Nchekwa RAM nke 6GB
Banyere nchekwa dị n'ime, ọ ga-adị na nsụgharị atọ dị iche iche nke 64, 128 ma ọ bụ 256 GB
23 megapixel igwefoto isi, f / 2.0, Sony IMX318, EIS, kpuchie na sapphire. Ekwe omume nke Ndekọ video na 4K mkpebi
Batrị 3.000 Mah nwere Qualcomm Ndenye Nchaji 3.0
USB 3.0 -dị-C, Hi-Res Audio
Dị na agba; ọla-edo, ọla-ọcha na isi-awọ
N'oge na-adịbeghị anya, ngwaọrụ mkpanaka nwere nnukwu ngebichi dị ka ejiji na mgbe ngosi nke Xiaomi Max, ọ bụ Asus kpebiri ịkụ nzọ na njedebe nke ụdị a. Nke Zenfone 3 Ultra n'enweghị obi abụọ ọ bụla ihe kachasị pụta ìhè bụ ihuenyo nke ihe ọ bụla ọzọ na ọ dịghị ihe na-erughị 6,8 sentimita asatọ.
Dị ka ngwaọrụ ndị ọzọ nke ụdị a na ahịa, nkọwa nke njedebe anaghị eso ihuenyo ahụ. N'ihe banyere nke a Zenfone 3 Ultra, a na-agbada nkọwa ahụ n'ụzọ ụfọdụ ma e jiri ya tụnyere Zenfone 3 Deluxe, ọ bụ ezie na anyị na-eche ihu karịa phablet na-adọrọ mmasị, yana nlezianya anya.
Ọzọ anyị ga-enyocha ihe isi atụmatụ na nkọwa nke Asus Zenfone 3 Ultra a;
Ihuenyo 6.8-inch IPS LCD nwere mkpebi 1.920 x 1.080
Nchekwa n'ime ruo 128GB
Igwefoto megapixel 23 nwere ihe mmetụta Sony IMX318
Mmekọrịta; 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.2, Cat 6 LTE
Batrị 4.600 mAh nwere Ndenye Nchapu 3.0
Dị na agba ntụ, ọlaọcha na pink
Ahịa jupụtara na ngwaọrụ nke ụdị a, yana nnukwu ihuenyo, yana na oge ọ bụla kpalite mmasị dị ukwuu n'etiti ndị ọrụ. Ya price na nke a nwere ike ịbụ nsogbu na nke ahụ bụ na ndị ọzọ phablets nke ụdị a na nso nso ulo oru nwere a ukwuu ala price.
Maka oge ahụ Asus enyeghi anyi ihe ngosi banyere oge nbata nke ezinne ohuru nke Zenfone 3 ga emeỌ bụ ezie na dị ka asịrị niile ha ga-ewe oge dị na Asia. Ọbịbịa ya na Europe, ọ bụrụ na anyị eleba anya na mgbasa ndị ọzọ, ọ ga-ewe obere oge ma eleghị anya mgbe oge ọkọchị anyị nwere ike ịzụta ya na mba Europe ọ bụla.
N'oge a ihe a niile dabere na asịrị na echiche wee bụrụ ihe kacha mma ichere maka Asus iji gosipụta igba egbe ahụ. Ihe na-abụghị gọọmentị bụ ọnụahịa nke nsụgharị 3 nke Zenfone 3, nke anyị na-egosi gị n'okpuru;
El Zenfone 3 ga-adi maka 299 dollar
El Zenfone 3 Ọkachamma ga-adi maka 499 dollar
El Zenfone 3 Ultra ga-adi maka 479 dollar
Nkwekorita nke Asus na ezin’ulo ohuru nke Zenfone 3 bu nke siri ike ma dikwa nma nke ukwuu. Ka oge na-aga, ụlọ ọrụ ahụ enweela ike melite atụmatụ nke ngwaọrụ ya ma mepụta ngwaọrụ ndị ziri ezi na atụmatụ na nkọwa.
Na enweghị ike ịnwale ya 3 ngwaọrụ mkpanaka ọhụrụ, Asus ịga nke ọma n'ahịa ha na ha yiri ka obi siri ha ike, ọ bụ ezie na iji gosipụta nke a, anyị ga-echere ebe anyị maaralarị etu ahịa ekwentị mkpanaaka dị n'ọtụtụ oge.
Kedu ihe ị chere gbasara Zenfone 3 ọhụrụ nke Asus gosipụtara taa?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Asus Zenfone 3, Zenfone 3 Deluxe na Zenfone 3 Ultra bụ ndị ọrụ ugbu a
Usoro 7 iji nweta ọtụtụ ihe na Spotify
Mmehie isii ị na-eme, ma ghara ime ya, jiri ngwaọrụ gam akporo gị